Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » nzukọ » Nhọrọ Visa Expat ọhụrụ nwere ike ịkwalite njem nlegharị anya GCC
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa UAE
Inye ndị ọrụ si mba ọzọ, ndị tozuru oke, na visa obibi ka ha nọrọ n'ofe ndụ ha na-arụ ọrụ na mmeghe nke usoro nhọrọ visa ọhụrụ ndị ọzọ ga-abụ isi maka njem nlegharị anya ma na-enye nkwalite na ebe nkiri, ihe omume na ebe ntụrụndụ. Nke a ga-abụ otu n'ime isiokwu ndị a na-ekwu na Ahịa Njem Arabian (ATM), 2022, nke na-eme na Mee 8-11.
ARIVAL Dubai @ ATM ilekwasị anya na nhọrọ visa ọpụpụ ọhụrụ, nke nwere ike inye nkwalite maka mmemme mpaghara, ebe nkiri, ihe omume na ebe ntụrụndụ.
Ileta ndị ezinụlọ na ndị enyi nke ndị lara ezumike nka ga-enyere aka mee ka ọnụ ọgụgụ dị elu na ọwa mmiri dị elu nke oge njem dị elu na nke dị ala.
Ngalaba ụgbọ elu Gulf ga-enweta uru nke ahịa zuru ụwa ọnụ nke ruru ijeri $254.
ARIVAL Dubai @ ATM na-akwalite imepụta ahụmịhe n'ime ebe site na ịnye nghọta na obodo maka ndị okike na ndị na-ere njegharị, ihe omume na ihe nkiri. Ọ na-enyocha usoro dị ugbu a na nke ga-eme n'ọdịnihu ma na-elekwasị anya na azụmahịa na-eto eto site na ịzụ ahịa, teknụzụ, nkesa, nduzi echiche, na njikọ ndị isi.
A na-eme atụmatụ na ugbu a enwere ihe karịrị nde 35 ndị ​​ọrụ ọpụpụ na mba GCC na enwere ike ịnwe oke oke nke obodo ndị ọcha, nke nwere ike ịla ezumike nka na GCC, ọbụlagodi na ọ bụ naanị obere oge. .
"Site na ohere na oge dị n'aka ha, ọ ga-abụ ihe okike, ọ bụghị nanị na ndị a lara ezumike nká ịga njem, kamakwa ịnweta ezinụlọ na ndị enyi. Ụgbọ elu, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ebe njem na ebe ntụrụndụ ndị ọzọ, ha niile na-erite uru site na ntinye ego ọzọ a na-enweta nke nwere ike ịla n'iyi ma ọ bụrụ na ndị lara ezumike nká laghachiri n'obodo ha. " Ọnye na -bụ Danielle Curtis?, Ihe ngosi Director ME, Ahia njem ndi Arabia.
"Na mgbakwunye, ọ bụghị ihe ndabara na abụọ n'ime ahịa nri nri Dubai na 2019, India nwere ndị ọbịa nde abụọ na UK, yana ndị ọbịa nde 1.2 nwere obodo na UAE, nke nde 2.6 na 120,000 n'otu n'otu," ka ọ gbakwụnyere.
N'ịchọpụta ike a, Dubai Tourism na mmekorita ya na General Directorate of Residency and Foreigners Affairs (GDRFA-Dubai), ewepụtala ụzọ a na-akpọ "Retire na Dubai," ụdị nke mbụ na mpaghara ahụ, usoro bara uru na ụfọdụ kacha nta. ego chọrọ, nke ndị bi na Dubai na-eru nso ịla ezumike nká, nwere ike itinye akwụkwọ maka visa ezumike nká afọ ise.
"Ọ bụrụ na atụmatụ a ga-aga nke ọma, ọ ga-abụrịrị na mba GCC ndị ọzọ ga-agbaso n'oge ụfọdụ. Obi abụọ adịghị ya na ndị si mba ọzọ lara ezumike nká ga-atụnye ụtụ dị ukwuu na ngalaba njem nlegharị anya, na-anata ezinụlọ na ndị enyi ma na-aga n'ihu na-ebi ndụ dị mma nke ha na-amabu, "Curtis kwukwara.
Kwesịrị $254 ijeri n'ụwa niile na 2019, njegharị, ihe omume, na ihe nkiri nke njem na njem nlegharị anya abụghị naanị akụkụ nke atọ kachasị ukwuu nke njem; ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị ji eme njem na mbụ. Inye ihe na-akpali akpali dị otú ahụ ga-abụ ihe omume na ihe nkiri, dị ka Expo 2020, FIFA World Cup 2022 na Qatar, Ain Dubai, yana ihe nkiri nlegharị anya na-abịa na Saudi Arabia na ịma mma okike nke Oman.
Njem na-aga n'ihu, ihe omume zuru ụwa ọnụ maka teknụzụ njem nke na-etinye ìhè na teknụzụ kachasị ọhụrụ, ọgbọ na-abịa maka njem na ile ọbịa, nzukọ ndị na-azụ ahịa ATM na mmemme ịkparịta ụka n'ike.
ATM 2022 ga-anabatakwa nzuko ogbako raara onwe ya nye na Global Stage, na-ekpuchi ụgbọ elu, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, njem nlegharị anya egwuregwu, njem nlegharị anya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ pụrụ iche. Otu Global Business Travel Association (GBTA), njem azụmahịa mbụ nke ụwa na nzukọ azụmaahịa, ga-esokwa ọzọ na ATM. GBTA ga-ebuga ọdịnaya njem azụmahịa kachasị ọhụrụ, nyocha na agụmakwụkwọ iji kwalite mgbake na nkwado uto na njem azụmahịa. Na mmekorita ya na "Arival the in-destination voice," ATM ga-agba ogbako ọkara ụbọchị na Mee 8 ma ọ bụ ụbọchị 1 nke ATM.
Mgbe afọ 2021 gasịrị, Igwe ndọrọ ego Virtual ga-eme ọzọ n'ime izu njem ndị Arab iji kwado ihe ngosi ATM dị ndụ. Site na mmemme webinars sara mbara, dị elu yana nhazi oge zuru oke nke nzukọ vidiyo dị maka ndị ngosi nwere ndị na-azụ ahịa isi gburugburu ụwa.
Arebia Travel Market (ATM), ugbu a n'afọ 29th, bụ onye isi, njem mba ụwa na njem nlegharị anya na Middle East maka ndị ọkachamara njem nlegharị anya na mbata na ọpụpụ. ATM 2021 gosipụtara ụlọ ọrụ ngosi 1,300 sitere na mba 62 gafee ụlọ nzukọ itoolu na Dubai World Trade Center, yana ndị ọbịa si karịa mba 140 n'ime ụbọchị anọ ahụ. Ahịa Njem Arab bụ akụkụ nke izu njem ndị Arab. #Ideas bịarutere Ebe a
eTurboNews bụ onye mgbasa ozi maka ATM.